Sonos Hambisa, isithethi esitsha sikaSonos siya phesheya | Iindaba zeGajethi
Sonos Hambisa, isithethi esitsha sikaSonos siya phesheya
I-Sonos iyaqhubeka nokusebenza ukubonelela ngemfazwe elungileyo yeendlela ezizezinye ngokubhekisele kwisandi esikumgangatho ophakamileyo kunye nomgangatho ophakamileyo, sonwabile ngokuhlalutya izixhobo zabo ezininzi kwaye ngeli xesha besingaphoswa kukumiliselwa kwabo kwangoko, iSonos Move. Sithetha ngesithethi esitsha sangaphandle seSonos ngebhetri ezimeleyo kwaye ngoku sineBluetooth, hlala uhlalutyo olunzulu. Njengamaxesha onke, siza kukuxelela ngamanqaku aphambili esi sixhobo sikhethekileyo esinike ukujika okubalulekileyo kwesikrini kumgaqo-nkqubo we-Sonos ukuza kuthi ga ngoku, kwaye kukuba abanazixhobo zeBluetooth kwikhathalogu yabo, kungasafani nebhetri .
Njengakwamanye amaxesha, Sihamba kunye nohlalutyo kunye nevidiyo apho uya kukwazi ukubona ukungabikho kwebhokisi, imixholo yebhokisi kwaye ngokuqinisekileyo le Sonos Mov iqulunqwe kwaye yenziwa njani, ithuba elifanelekileyo lokujonga nje ngaphambi kokulandela olu hlalutyo olunzulu kunye nedatha yobuchwephesha ngqo kule webhusayithi.
1 I-Sonos Hambisa iinkcukacha zobugcisa
2 Uyilo: Ngokuhambelana nento ebisenziwa luphawu
3 Yakhelwe ukugcina: IP56 kunye nebhetri esuswayo
4 I-Sonos endala, ngoku eneBluetooth
I-Sonos Hambisa iinkcukacha zobugcisa
Ngaphambi kokuba siqale ukuhlalutya uyilo, masiqwalasele idatha yezobuchwephesha, sifumana isithethi esinaso Iiklasi ezimbini zedijithali zokukhulisa idijithali, i-tweeter, i-woofer ephakathi kunye neefowuni ezine esinokuthi sinxibelelane ngayo. Inodibaniso lweBluetooth 4.2, i-WiFi 802.11 b / g / n, kunye Inkxaso ye-AVRCP, i-SBC kunye ne-AAC. Ewe kunjalo, kwinqanaba lobuchwephesha, le Sonos Move akufuneki isilele nantoni kwaye kubonakala ngathi iyakuba njalo.
Asinayo idatha yezobuchwephesha kwinqanaba lamandla kwii-decibel, njengesiqhelo kuhlobo lophawu, nangona kunjalo into endinokukuqinisekisa ngayo kukuba izandi zomelele, kwaye zininzi. Yinto efana noko besiyonwabela ngokomzekelo kwi-Sonos One kude kube ngoku, Ke ngokomgaqo asizifumani izizathu ezivakalayo zokuthandabuza amandla alo, iimvavanyo zokuqala esizenzileyo ziye zanelisa. Ukutshaja ibhetri yayo (2.500 mAh) siya kusebenzisa uqhagamshelo I-USB-C kunye nesiseko sokutshaja esingu-100-240V.
Uyilo: Ngokuhambelana nento ebisenziwa luphawu
Sifumana imveliso imilinganiselo engama-240 x 160 x 126 eemilimitha, Uyilo olubonakalayo kwaye olusishukumisela ukuba sikhawuleze Sonos Omnye. Ngale nto unayo ubunzima obupheleleyo be-3 Kg kubandakanya nebhetri, Ngokuqinisekileyo ayisiyonto ilula kwimarike kuthathelwa ingqalelo ukuba isizathu sayo sokuphatheka, kodwa kufuneka sichaze ukuba ubunzima luphawu lwezithethi ezisemgangathweni.
Ngaphezulu sinefayile ye- Isibonakaliso se-Sonos esiqhelekileyo se-LED, kunye nolawulo oluchukumisayo lokuchukumisa ukulawula umxholo wemultimedia. Le yindlela esiza kukwazi ukunxibelelana nayo ngokulula, kodwa into endimele ukuyigxininisa kakhulu kuyilo lwayo yinto yokuba uSonos ukhethe ukuyenza ibonakale, ukuba unonxibelelwano nophawu uya kuyamkela ngokukhawuleza izixhobo. Ngasemva, ukongeza kunxibelelwano lwe-USB-C esinalo ukuvula okuncinci ukuyihambisa, iqhosha lokucima / ukucima kunye neqhosha elingenazingcingo.
Yakhelwe ukugcina: IP56 kunye nebhetri esuswayo
Njengesandisi-lizwi esilungileyo ngaphandle, kufuneka ibeneempawu ezithile zokuqinisekisa ukumelana kwayo, kwaye kungenxa yokuba iimeko ezininzi zinokwenzeka ngaphandle ezibeka ukuthembeka kwesixhobo emngciphekweni. Njengomgaqo oqhelekileyo, uSonos wenza izixhobo zakhe, ezinje ngeSonos One, eneempawu ezithile zokumelana. Le Sonos Move ayinakuba ngaphantsi, isiqinisekiso se-IP56 esithintela amasuntswana othuli kwaye ngokuqinisekileyo siyaphambuka, nangona singazukukwazi ukuqinisekisa ukuba ihlala ihleli ukuba siyifaka ngokupheleleyo.
Enye into efanelekileyo yokuhlala ixesha elide kukuba uSonos uthathe isigqibo sokubheja kubandakanya 2.500 mAh ibhetri ekhutshwayo, Ithetha ntoni le nto? Ewe, ngokuchanekileyo ukuba ukuhlala kwayo akunakuxhomekeka kwimpilo yebhetri, edla ngokuba yinto yokuqala ehlala isilela. Kule meko I-Sonos iyasiqinisekisa ukuba singathenga ibhetri ngokwahlukeneyo, nokuba sifuna ukugcina ibhetri ukwandisa ukuzimela kwayo, okanye ukuba eyona nto siyifunayo kukuyitshintsha. Kuba iphulukene neempawu kunye nokuzimela, kubonakala kum kuyimpumelelo kakhulu, ukongeza ekutshintsheni kulula kakhulu kwaye ndiyichaja nayo, isiseko sayo sokutshaja, esisisiseko esincinci esine-USB-C elula kakhulu kwaye ukuyibeka ngaphezulu siya kuba nokuzimela okuyimfuneko, inokusetyenziswa nayo ngokudibanisa, kunjalo.
I-Sonos endala, ngoku eneBluetooth
Sinayo, kunokwenzeka njani ukuba kungenye indlela Idlalwe 2, Unxibelelwano kunye neenkonzo zomculo ezingaphezulu kwe-100 ngenxa yesicelo seSonos kwaye sinazo iimakrofoni ezine, Ezenzelwe ukusinika ukuhambelana ngokupheleleyo nabaxhasi babini abaphambili kwimarike, U-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, nangona oku kuya kufuna unxibelelwano lwe-WiFi. Akukho phawu, ewe, lokukwazi ukuphendula iifowuni. Ukubhekisa kwi ukuzimela, Kubalulekile kolu hlobo lwemveliso, uSonos ufuna ukuba siqinisekise ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 zokudlala, kwiimeko eziqhelekileyo ngeBluetooth sifikelele ngokulula ngentsimbi ye-9, oku kuyancipha ukuba sisebenzisa iWiFi, ngokucacileyo.
Olu nxibelelwano lwe-WiFi alufumaneki ngaphandle, ke siya kuba nonxibelelwano lweBluetooth 4.2 ngendlela elula, ukuthumela umculo kunye nokuwulawula. Oku kuyenza ibe bhetyebhetye kakhulu kwaye imele ngaphambili nasemva kweSonos. Siqinisekisile ukuba uqhagamshelo lweBluetooth lulula njengoko ubuya kulindela ku-Sonos, kwaye nakwizixhobo ze-iOS sinokujonga nokuzimela kwesithethi.
Nge-Sonos Move sifumene isithethi esisebenza ngeendlela ezahlukeneyo se-Sonos, bebengazange benze sixhobo sinje ngaphambili kwaye ngokuqinisekileyo bebengafuni nanye into ukuba ilahleke kuyo. Oku kunexabiso, 399 I-euro yile nto ibalwa ngu-Sonos, kwaye lixabiso elibizayo. Njengamaxesha amaninzi benditshilo ukuba amaxabiso abonelelwe zii-Sonos Beas okanye i-Sonos One ibonakala ngathi ayibizi mali ininzi, kufuneka nditsho ukuba i-Sonos Move ibonakala ibiza kakhulu kum, kucacile ukuba inika ithuba lokuba yenye i-Sonos ekhaya Ukongeza ukuze ndikwazi ukuyikhupha endlwini, kodwa ndikufumanisa kunzima ukucinga ukuba ndihlawula i-euro ezingama-399 ngayo. Inyani yokuba uhlala uluphawu okanye ukuba uqhele ukwenza isandi seprimiyamu iya kudlala xa usenza isigqibo sokuba ukwazi ukukhetha enye okanye enye indlela. Emva kovavanyo, i-Sonos Move inikezela ngesandi esinamandla kunye nomgangatho, uyilo kunye nezinto zokutshatisa uphawu kunye nokunxibelelana ngaphandle kwemida, yimveliso ejikelezileyo engenakufumaneka kuye wonke umntu.
Uyilo kunye nomgangatho wamacandelo
Ukuzimela okukhulu kunye nokuxhathisa okuhle ngaphandle
Unxibelelwano olungapheliyo, nkqu nabancedisi ababonakalayo
Umgangatho kunye nesandi esinamandla
Ixabiso libonakala liphezulu kum
"Umsesane wokulayisha" mhlawumbi ubuncinci kakhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sonos Hambisa, isithethi esitsha sikaSonos siya phesheya
Isizukulwana esitsha se-IKEA Indawo yohlelo lokusebenza ngoku iyafumaneka
IAmazon yazisa ngeNqanaba elitsha lezixhobo zeEcho